Ogaden News Agency (ONA) – Culumada Xeryaha Qaxootiga oo shirkoodii meertada ahaa isugu yimid xerada Ifo
Culumada Xeryaha Qaxootiga oo shirkoodii meertada ahaa isugu yimid xerada Ifo
Maalinnimadii khamiista oo ay taariikhdu kubeegnayd 27/3/14 waxaa xerada qoxootiga Ifo lagu qabtay shirkii culimo owdiinka sadexda xero ee Dhadhaab. Kulankan oo ah mid meerta ah oo xeryaha hadba mid lagu qabto ayaa doorkan lagu qabtay xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab, waxaana kasoo qabgaley wufuud balaadhan oo kakala socotay xeryaha Dhagaxlay iyo Xagardheere iyo waliba xerada martida loo ahaa ee Ifo. Shirka culumada ayaa furmay abaare 10:00 barqin nimo xiliga Dhadhaab waxaana sidii caadada ahayd lagu daahfuray aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah. Intaas kadib waxaa lasii gudagalay ajandayaashii shirka waxaana kamid ahaa qodobadii lagaga hadlay iskuxidhka culimada S.Ogadenia dal iyo dibadba, Wacyigalinta bulsha waynta S.ogadenia, Kahortaga dacaayadaha riqiiska ah ee ay wadaan kuwo shaati diimeed xidhan iyo Hurumarinta waxbarashada ubadka sookoraya ee S.ogadenia.
Mar ay culimadu kahadlayeen iskuxidhka culima owdiinka ree Ogadenia ayay xuseen baahida looqabo in lahelo dalad midaysa culimada soomaalida Ogadenia si looga hortago shirqoolada uu cadawgu maleegayo iyadoo bulshada laga wacyigalinayo sidoo shirqooladaas looga feejignaan lahaaa. Dhanka kale culimada ayaa kahadlay baahida looqabo barasha diinta islaamka gaar ahaan da’a yarta sookoraysa oo loobaahanyahay in lagu barbaariyo diintooda iyo dhaqankooda suuban sifo ay uga badbaadaan dhaqabada xunxun ee uugumaysigu fidinayo si uu uhelo jiil aan diin iyo damiirtoona lahayn oo ay gacanta si sahlan ugu dhigi karaan sidoo kale culimada ayaa kubaaqday in guud ahaa shacabwaynaha S.ogadenia ay ilaaliyaan diintooda iyo dhaqankooda sifo dadka iyo dalka looga badbaadiyo dhaqabada doolka ah ee uu gumaysigu faafinayo sidoo kale culimada ayaa carabka ku adkeeyay da’a yarta kudhaqan wadamada dibada in lagu barbaariyo dntooda suuban iyo dhaqankooda wanaagsan iyo waliba lahjada ay deegaan ahaan uleeyihiin si loobadbaadiyo dhaqankeenii wanaagsanaa.
Waxay culimada eedayn dusha kaga tuureen kuwa xidha shaati culimo oo kudhaqan Ogadenia iyo wadamada dariskaba oo ay ku sheegeen kuwo halaynaya diintii islaamka iyo si xun uturjumaya qaar kalena ay ciidanka gaalada ugacan galinayaan mujaahidiin gaalada dagaal kula jirtay waxayna ugu baaqeen in ay falalkaas foosha xun katanaasulaan.
Guntii iyo gabagabadii culimada S.ogadenia ee kudhaqan Dhadhaab ayaa bulsha waynta S.ogadenia iyo bulshada Soomaaliyeed ba meel ay joogaanba ugu baaqay in ay gacmaha isqansadaan isku meelna ugusoowada jeedsadaan cadawgooda soojireenka ah ee Itoobiya sil helo bulsha Soomaali ah oo kafayow eelka uu reebayo gumaysiga madow.